Shiinaha Customized boorsadaada saboole, Shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada isboortiga > Boorsada dhabarka barafka
Boorsada dhabarka barafka
Boorsooyinka dibedda ee ugu wanaagsan waxay la yimaadaan astaamo badan oo feker ah oo loogu talagalay inay noloshaada maqaarka uga fududaan. Liistada soo socota sinaba uma ahan wax dhammeystiran, laakiin waxay ka kooban tahay waxyaabo aan u baahan nahay inaan fiiro gaar ah u yeelano. (1) Iswaafajinta fuuq-celinta: Haddii aad qorsheyneyso inaad qaado kaadiheysta kaadiheysta, fadlan hubi inay jirto qayb gooni ah oo ka ilaalinaysa kaadi haysta iyo tuubada.
Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2003. Ganacsigeena ugu weyni waa nashqadeynta, soosaarka iyo iibinta alaabada boorsada, sida: boorsooyinka laptop-ka, boorsooyinka iskuulka ardayda, boorsooyinka iskuulka, bacda xafaayada, boorsooyinka dibada, boorsooyinka isboortiga, rucksacks, boorsooyinka iskuulka kartoonada iyo alaabada kale. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ballaarineynaa ganacsiyada kale, sida soosaarka Naqshadeynta: bacaha suunka, boorsooyinka duffel, boorsooyinka gacanta, boorsooyinka qalabka, boorsooyinka qadada, boorsooyinka qoryaha, boorsooyinka taatikada ee militariga, boorsooyinka xayawaanka iyo alaabada kale. Si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee macaamiisha, waxaan sidoo kale dhisnay waax ka caawisa macaamiisha inay helaan qaybaha kale ee badeecadaha ee Shiinaha. Shiinaha dhexdiisa, waxaan leenahay silsilad xoog leh oo qaan gaar ah oo kor u kacsan iyo silsilad saadka oo hoos mara Tani waa faa'iidadayada ugu muhiimsan. Faa'iidadan awgeed, waxaan ugu adeegi karnaa dhammaan macaamiisheenna si dhakhso leh, ka wanaagsan oo ka wanaagsan, oo waxaan u siin karnaa macaamiisheenna adeegyo wax-soo-saar tayo sare leh oo tayo sare leh, waxaan sidoo kale macaamiisha ku siin karnaa badeecooyinkeena noocyada asalka ah oo tayo sare leh. Shaqaalaheena 600 iyo 500 mashiinada wax soo saarka ayaa ah hantida ugu weyn. Sideen u ilaashan karnaa booskeena hogaaminta? Waxaan mudnaan siineynaa isku xirka dadka, waxaana muhiimada koowaad siineynaa ilaalinta xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Aqoon isweydaarsiga 18,000 mitir murabac ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel dhigno qalab wax soo saar iyo shaqaale wax soo saar badan, isla markaana aan u siino macaamiisha adeegyo ka imaado naqshadeynta wax soo saarka, soosaarka muunada, soosaarka tirada badan, saadka xamuulka, iyo bayaanka kastamka. Haddii aad u baahato inaad habeyso alaabada boorsada ama aad metesho sumadeena, fadlan nala soo xiriir:adamdavis@fofrerbag.com
1. Soo bandhigida alaabada boorsada dhabarka
(1) Boorsadeena barafka waxaa lagu qalabeyn karaa looxyo hal iyo labo ah. Iswaafajinta waa mid aad u sarreeya.
(2) Boorsadan barafka wata waxaa lagu qalabeeyaa bacda keydka koofiyadda madaxbanaan, lanyard veneer, lanyard laba geesood ah, bac madax banaan oo kabaha lagu kaydiyo, dharka bacda barafka lagu dhejiyo dharka barafka, iyo bacda lagu kaydiyo qalabka siyaada ah. Isticmaalka waxqabadka badan ayaa ka sahlan.
(3) Bacda taageerada hal koodh waxay leedahay 4mm loox PE, kaas oo sifiican loo xoojiyay, amaan ah oo lagu kalsoonaan karo.
(4) Boorsada barafka waxay u isticmaashaa naylon ballistic 1680D sida dusha sare ee boorsada. Dusha sare ee maaddada waxaa lagu dahaadhay daahan biyuhu xireen, kaas oo leh qudaar aad u sarreeya iyo shaqo biyo ah, maaddadani waxay leedahay awood aad u sarreysa, taas oo ka dhigaysa boorsada dhabarka barafka leh Waxay leedahay cimri dherer wanaagsan iyo kalsooni.
(5) Dhar naylon Oxford 210D ah oo laysku halleyn karo ayaa gudaha looga isticmaalaa, taas oo u adkeysata xirashada isla markaana leh adeeg dheer.
(6) Waxaa jira boorsooyin kala sooc ah oo qallalan oo qoyan gudaha boorsada barafka, taas oo si wax ku ool ah u kala sooci karta walxaha qalalan iyo kuwa qoyan. Kuu ogolaanayaa isticmaalayaasha inay leeyihiin alaab qalalan oo la heli karo jimicsiga ka dib.
2.Boorsada dhabarka barafka product parameters (specifications)
1680D naylon ballistic-ga ah ee Oxford
210D nylon dharka Oxford
Midabka waa loo beddeli karaa sidii loogu baahdo
Dhererka 36cm X Ballaca 30cm X Dhererka 55cm
Cabirka waa la beddeli karaa haddii loo baahdo
1 shey oo ku jira 1 bac caag ah, 10 shey oo kartoon ku jira
muuqaalada la isticmaali doono
Miisaanka guud ee alaabta
3. Sidee loo doortaa boorsada ugu fiican ee barafka?
Boorsooyinka dibedda ee ugu wanaagsan waxay la yimaadaan astaamo badan oo feker ah oo loogu talagalay inay noloshaada maqaarka uga fududaan. Liistada soo socota sinaba uma ahan wax dhammaystiran, laakiin waxay ka kooban tahay waxyaabo aan u baahan nahay inaan fiiro gaar ah u yeelano.
(1) Iswaafajinta fuuq-celinta: Haddii aad qorsheyneyso inaad qaado kaadiheysta kaadiheysta, fadlan hubi inay jirto qayb gooni ah oo ka ilaalinaysa kaadi haysta iyo tuubada.
(2) Jiinyeerka marinka gadaal ama dhinaca: Waxay waqti badan badbaadin kartaa inaad gasho waxyaabaha salka ku yaal shandada sagxadda iyadoon laga saarin waxyaabaha oo dhan.
(3) Qaadista: Faaska barafka wuxuu ku yaal salka hore ee boorsada. Hal ama in ka badan oo wareegsan iyo si fudud loo hagaajin karo siddooyin ama xargo ayaa hagaajin kara hal ama labo qalab baraf ah, taas oo muhiim u ah barafka iyo safarada buuraha.
(4) Daisy silsiladaha silsiladda Daisy: siddooyinkan ku yaal dhabarka xirmada waxay fududeynayaan in lagu qaado qalabka fuulitaanka ama cariishyada dusha ka baxsan xirmada waxayna gacan ka geysaneysaa ilaalinta dharka baakadka.
(5) Nidaamka qaadista koofiyadda: dabool dabacsan ama boorso hagaajin karta koofiyadda kana hortegi karta qarxinta marka aadan xirnayn.
(7) Awooddu aad ayey muhiim u tahay: Cabbir kasta oo u dhexeeya 10 litir iyo 20 litir waa mid aad ugu habboon in loogu isticmaalo aagagga fog ee ay ka shaqeeyaan wiishashka, heliports ama maalintii. 20-35 litir ayaa ku habboon safarka masaafada dheer iyo xaaladaha cimilada isbedelaya. Haddii aad ku safreyso qol ama safar habeennimo ah, waa inaad tixgelisaa 30-55 litir. Ugu dambeyntiina, haddii aad qorsheyneyso safar dheer oo aad u baahan tahay teendho, wixii cunto karinta ah ama qalabka dhalaalaya, waxaad u baahan tahay 60-70 litir.
(8) Barkinta hawadu aad ayey muhiim u tahay: barkinta shilalka ee loo yaqaan 'Avalanche airbags' waxaa loogu talagalay inay kugu soo dhoweyso dusha barafka marka uu daadadku diraan. Haddii ay dhacdo baraf baraf ah, barkinta haamaha hawadu waxay kordhin doontaa muggaaga waxayna kaa caawin doontaa inaad ku ilaaliso dhererka ugu sarreeya ee suurtogalka ah ee bacda barafka. Waxaa la cadeeyay in xirashada iyo geynta boorsooyinka shilka ee saxda ah ay si wax ku ool ah u kordhin karto fursada noolaanshaha baraf, laakiin waxaa muhiim ah in la xasuusto in xirashada barkinta shilka ee badeedka hawadu aysan damaanad qaadaynin badbaado.
(9) Habboona: Shandadaada waa inay ahaato mid raaxo leh, waad xiran kartaa maalintii oo dhan welwel la'aan, markaa hubi inaad tixgeliso dhererka boorsada iyo sida ay ugu habboon tahay jirkaaga. Iskuday inaad tijaabiso boorsadaada adoo buuxinaya culeyska shandadaada kuna xiraya jirkaaga dhamaan suumanka iyo suumanka si aad u hubiso inay ku haboontahay ujeedada.
4. Warshad soo bandhigid toogasho dhab ah
5. Baakadaha iyo geynta boorsooyinka dhabarka barafka
(1) Qaybta iibka: midkiiba.
(2) Cabirka baakadka ee caadiga ah: dherer 36cm X ballac 30cm X dherer ah 55cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 38cm X 50cm X 57cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 13.5Kg.
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 12Kg.
(6) Qaabka gaadiidka: badda, hawada, dhulka. Waxaan dooran doonaa habka ugu habboon ee gaadiidka saadka.
(7) Waxaan qaabeyn karnaa qaab wax ku ool ah oo wax ku ool ah, laakiin taasi waxay hureysaa waxyaabo qaar waxayna sababi kartaa isbadal muuqaalka sheyga ah. Guud ahaan kuma talineyno macaamiisha inay adeegsadaan qaabkan.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadeyn doonaa baakadka boorsadaan baseball-ka ah iyadoo loo eegayo shuruudahaaga.
(9) Haddii aad u baahato muunad ka mid ah boorsada baseball-ka, waxaan dooran doonnaa inaan diyaarad kuugu soo dirno.
6. Adeegga iibka kadib
(1) Waxaan sameyn doonnaa wax kasta oo suurtagal ah si aan kuu badbaadinno kharashyada.
(2) Waxaan xiriiri doonaa 24 saac. Waxaan u isticmaali doonaa isgaarsiin hufan si loo hubiyo isgaarsiinta macluumaadka habsami leh.
(3) Ka dib markii muunad la iibiyo, haddii nuqulkii ugu horreeyay loo baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan wax ka beddelaynaa muunadda iyadoo la raacayo faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamka oo dhan ee soo saarista nooca labaad ee muunadda gebi ahaanba waa bilaash.
(4) Sanduuqayaga shirkadda ayaa si joogto ah u shaqeynaya waxaana ka shaqeeya shaqaale xirfadlayaal u ah adeegga macaamiisha. Waad noo soo qori kartaa talo iyo cabasho wakhti kasta. Waxaan u aqrin doonnaa una soo jawaabi doonnaa si hufan oo taxaddar leh.
(5) Waxaan si adag u xakamayn doonnaa tayada badeecadaha oo aan kuugu soo gudbin doonaa adiga oo ku dhaafaya heerka 100%.
(6) Waxaan kugula socodsiin doonaa horumarka wax soo saar ee alaabta dalabka waqtiga loogu talagalay inta lagu gudajiro howlaha wax soo saarka, si aad si dhaqso leh u fahmi karto heerka amarka.
Q1. Intee in le'eg ayey kugu qaadaneysaa inaad la xiriirto oo aad jawaab celiso?
A: Waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa 4 saacadood gudahood ka dib marka aan helno email-kaaga wax lagu weydiiyo.
Q2: Waa maxay wax soo saarkaaga wax soo saar badan?
(1) Boorsadeenna fudud waxay soo saartaa 50,000 oo xabbo maalintii iyo bil kasta 1,500,000.
(2) Boorsooyinka gacanta oo farsamo aad u dhib badan, soo saar maalinle ah oo ka kooban 3,000 oo cutub iyo bil kasta oo soo saarta 100,000 oo unug.
Q3aad. Muddo intee le'eg ayey tahay waqtiga hoggaaminta wax soo saarkaaga? Miyaad bixisaa shay-baarka? Ma bilaashbaa mise waa dheeri?
(1) Waxaan ku siin karnaa shaybaarro bilaash ah, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ka bixiso khidmadda degdegga ah ee Shiinaha illaa waddankaaga.
(2) 7-10 maalmood oo shaqo oo loogu talagalay shay-baarka la habeeyay, 48 saacadood oo loogu talagalay samballada barta
Q4: Ma dooneysid naqshadeynta wax soo saarkayaga, ma sameyn kartaa waxna waad soo saari kartaa sida ku xusan sawirka qaabeynta?
Jawaab: Haa, waxaan soo saari karnaa iyadoo loo eegayo sawirada naqshadeynta alaabtaada.
Q5: Ma leedahay xad MOQ ah?
Jawaab: Haa, waxay kuxirantahay heerka habka wax soo saarkaaga iyo tirada alaabtaada.
Q6. Ma waxaad tahay warshad ama ganacsade?
Jawaab: Waxaan nahay soo saaraha boorsooyinka Shiinaha, soo saaraha boorsada Shiinaha, ma nihin ganacsade.
Q7. Maxay yihiin shuruudaha lacag bixinta?
B:> = 1000USD, 30% T / T ka hor, 70% D / P shixnad.
Q8. Waa maxay waqtigaaga hogaaminta ee wax soo saar ballaaran maalmo?
500-1000 wareegga wax soo saarka wareegga 30-35 maalmood
1000-3000 wareegga wax soo saarka wareegga 35-40 maalmood
3000-5000 wareegga wax soo saarka 40-45 maalmood
5000-10000 wareegga wax soo saarka wareegga 45-50 maalmood
Marka loo eego heerka tiknoolajiyada wax soo saarka iyo dhibaatada alaabada la habeeyay, hagaaji wareegga wax soo saarka ee kor ku xusan. Waxaad ubaahantahay inaad hubiso sawirada la bixiyay ama shaybaarada si loo go'aamiyo wareegga waxsoosaarka saxda ah.
Q9. Qaab sheegis ah kee aqbashaa? Immisa maalmood ayaa muddada xigashada?
(2) Wareegga xigashada ee sheyga keliya waa 12 saacadood, iyo wareegga oraahda Dufcaddii waa 2-3 maalmood.
(4) Haddii aad u baahan tahay oraah, fadlan la soco habka oraahda, taas oo noo oggolaaneysa inaan si wanaagsan kuu soo xigano.
Q10aad. Muddo intee le'eg ayey tahay waqtiga hoggaaminta wax soo saarkaaga? Miyaad bixisaa shay-baarka? Ma bilaashbaa mise waa dheeri?
S11: Ma aqbashaa kormeerka dhinac saddexaad? Ma bixin kartaa warbixinno tijaabo ah? Sidee tayada wax soo saarkaagu yahay?
(1) Haa, waxaan aqbalnaa kormeerka dhinac saddexaad.
(2) Warbixinta tijaabada alaabada waa la bixin karaa.
(3) Waxaan nahay soo saare boorsooyinka Disney baseball, boorsooyinka Wal-Mart, iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Calaamadaha kulul: Boorsada dhabarka barafka, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka
Boorsada shaagagga shaagagga
Dabaqa 3aad, No.187 Xinyi Wadada, Beesha Jilian, Magaalada Qiaotou, Magaalada Dongguan, Gobolka Guangdong
Right Copyright 2020-2021 DongGuan bùxíngzhě Luggage Co., Ltd.